Cinema HD V2 App - Tarisa mafirimu, Series & TV Shows Zvemahara
Cinema HD Ye Android TV Bhokisi
Cinema HD YeGoogle TV 4k
Cinema HD YeSmart TV
Cinema HD ZveLinux
Fix Cinema HD Zvikanganiso
Cinema HD -Chaiyo Debrid Haisi Kushanda [Yakagadziriswa]
The Cinema HD APK haina data iripo, hapana zvinongedzo, hapana chinongedzo, kana server kukanganisa (FIX)
Subtitles Kupwanya, Buffering / Kusaisa, uye Cinema APK Kuparara zvese zvakagadziriswa.
Cinema HD APK Hapana Dhata, Hapana Yakapihwa, Hapana Kubatanidza kana Server Kanganiso (FIX)
Wongororo Movie on Cinema HD
Cinema HD V2 App - Tarisa mafirimu, Series & TV Shows Yemahara
Mazuvano, vanhu vanogara vachiona zvirongwa zvekutepfenyura paterevhizheni kana kushandisa internet kuti vaone mafirimu avanofarira nemashoo epamhepo pamaapplication anobhadharwa. Iwe unogona kuwana akawanda maapplication anopa aunofarira anoratidza uye mafirimu akadai Netflix, Hulu, HBO, mamwe maapplication ekutepfenyura, uye aya ese anobhadharwa maapp.
Kana iwe uchida kuona yemahara yekushambadzira app ine zvemhando yepamusoro zvemukati uye raibhurari hombe yemamuvhi nematerevhizheni, dhawunirodha. Cinema HD APK kubva pawebhusaiti yedu CinemaHDv2.Net kuti unakirwe izvozvi.
Iwe uchakurumidza kuwana izvo zvaunoda uye nekunakidzwa nazvo pane yako Android kifaa nekuda kwezvinhu zvinoyevedza zvinopihwa neapp iyi. Ramba uchiverenga chinyorwa kuti uongorore maficha aya.
Kusuma ku Cinema HD Apk
Zvakatanhamara maficha e Cinema HD
Nyore mushandisi interface
Matani emabhaisikopo neTV
Miniature cinema chiitiko
Nakidzwa nezvinhu zvine zvinyorwa zvidiki
Wedzera aunofarira anoratidza pane yako rondedzero
Hight quaility revolution uye ruzha
Nakidzwa nemabhaisikopo uye tv inoratidza pasina Indaneti
Sevha uye Dzosera
Chii chakakosha mu Cinema HD Apk faira
Unlimited nhamba yemafirimu uye anoratidza mahara
Hapana kubhadhara kunodikanwa
How download Cinema HD Apk pane Android?
General matanho ekurodha Cinema HD App
Detailed mirairo yekuisa Cinema HD Apk
How download Cinema HD App paFireStick 4K, Fire TV?
Matanho ekuisa Cinema HD Apk yePC?
Dharirai uye isai iyo Cinema HD APK pane Windows 11/10/8.1/7 PC kana MAC komputa [TUTORIAL]
PaLinux Mint, Ubuntu, uye Fedora, isa iyo Cinema HD MOD APK.
Matanho ekuisa Shlashlik Android Emulator paLinux
Maitiro ekutora iyo GenyMotion Android Emulator paLinux
kuisa Cinema HD app paLinux komputa uchishandisa Shashlik/GenyMotion Android Emulator
Kushandisa Genymotion Android Emulator
Nzira yekuwana sei Cinema HD kushanda pa Android TV Bhokisi & Smart Tv?
Features Cinema HD paSmart TV
gadza Cinema HD V2 paSmart TV [LG, VU, OnePlus, Samsung, MI, Phillips]
Maitiro ekushandisa Trakt TV pa Cinema HD v2 paSmart TV
Download Cinema HD V2 APK Ye Android TV Bhokisi
gadza Cinema HD V2 APK paRoku Stick
Danho 1: Pamudziyo wako weAroid, dhawunirodha uye isa iyo Local Cast app.
Step 2: Dhawunirodha uye isa iyo Yemuno Cast Receiver app pane yako Roku mudziyo.
Nhanho 3: Batanidza Yako Android kana Apple Chishandiso uye Roku Stick
gadza Cinema HD v2 yeGoogle TV 4K paChromecast
Maitiro ekugadzirisa Cinema HD Apk ine Shanduro Yazvino?
Kushandisa sei Cinema HD Apk?
Cinema HD iapp yakanaka yemidziyo yako yeAroid inokupa runyoro rwemabhaisikopo ane mukurumbira, uye emhando yepamusoro yeTV. Ichi chishandiso chinokupa iwe injini yekutsvaga kuti iwe nekukurumidza uwane mabhaisikopo nematerevhizheni eTV aunoda uye sarudza kunakidzwa.
Cinema HD Beta Shanduro
App iyi icharatidza zvinongedzo zvinowanikwa mahara pawebhusaiti, uye zvinozoonekwa pachigadzirwa chako. Nezvimiro zveapp iyi zvinogombedzera, haufe wakapererwa nesarudzo dzekutepfenyura dzemashoo nemabhaisikopo aunofarira. Cinema HD Apk vane?
ichi Cinema HD app ine yakapusa interface inokubatsira nekukurumidza kunzwisisa mashandisiro ayo uye mabhatani ebasa pachiratidziro cheapp. Unogona kutarisa zviri nyore kuburikidza nemazita ayo Cinema HD inoronga mune iyi app.
Zvinokutenderawo kuti utarise kuburikidza nematrailer emabhaisikopo nemashowa usati wafunga kuti wosarudza zvipi zvekunakidzwa nazvo kana kuti kwete. Iyo yakanaka uye yakapusa interface yeiyi Cinema app ichakubatsira iwe kuve neyakakura yekuona bhaisikopo chiitiko.
Iyi Cinema application inokupa iwe hupfumi hwemafirimu uye anoratidza muzvikamu makumi matanhatu. Iwe unogona nyore kuwana akasiyana siyana mafirimu kubva kune anotyisa, erudo, anime, uye nezvimwe muchikamu cheiyi app. Kunze kweraibhurari hombe yemabhaisikopo, iwe zvakare uchawana zviri nyore zvirongwa zveTV uye unakirwe nazvo zvakasununguka nazvo Cinema HD.
Cinema HD inokupa yakakura yekuona bhaisikopo chiitiko sekuona mudiki bhaisikopo. Kana iwe uchitya kuenda kumabhaisikopo kunoona mafirimu, iyi app ichava sarudzo yakakodzera kwauri.
Cinema HD v2 - Miniature cinema chiitiko
Iwe unongoda kuvhura yako Android foni uye uwane iyi Cinema apk kuti unakirwe nezvako zvaunofarira zvemukati mumba mako kana kupi kwaunoda. Ichi chishandiso chichabatsira vanofarira mafirimu nevaraidzo sewe kuchengetedza nguva yakawanda uye kunakidzwa nezvako zvaunofarira zviri nyore.
ichi Cinema HD App ichakupa chinhu chinobatsira chaunogona kutamba mavhidhiyo ane subtitles nekukasira. Kana ukasasarudza subtitles, uchafanirwa kusarudza nemaoko faira kuti unakirwe nezviri mukati. Chishandiso chinopa ma subtitles nenzira kwayo kuti ikupe iwe yakanyanya kunaka yekuona bhaisikopo ruzivo.
Nakidzwa nezvirimo ne subtiles - Cinema HD v2
In Cinema HD, iwe uchava nesarudzo yakanaka nayo Trak TV kubatanidzwa kunokubatsira kuti ugadzire playlists kuti iwe ukurumidze kutamba ako aunofarira anoratidza. Iyi ficha ichagadzira rondedzero yezviratidziro zvawakaona nguva pfupi yapfuura uye ichakuzivisa iwe pese painenge paine chikamu chitsva cheshoo kana bhaisikopo rawakaona.
Nekuda kweizvozvo, iwe unogona kukurumidza uye nyore kugadzirisa zvitsva uye kunakidzwa nezvakawanda zvinoyevedza maficha anofanirwa kupihwa neapp.
ne Cinema HD, iwe uchave nesarudzo yekubatidza otomatiki kukurumidza kunakidzwa nemabhaisikopo nemashowa esarudzo yako. Paunosarudza chimwe chinhu, chinozoratidza mamwe malink, uye iwe uchafanirwa kusarudza imwe yeaya malink uye wosarudza iyo "Tamba" sarudzo yekutanga kuona. Asi ne autoplay, haufanirwe kusarudza zvinongedzo, uye Cinema HD App ichatanga kuridza vhidhiyo iwe.
Cinema HD ine chimwe chinhu chinobatsira chinova Rondedzero Yakakurudzirwa, poindi yakasimba yeiyi bhaisikopo application inodiwa nevazhinji vashandisi. Mazhinji mashow uye mafirimu matsva anotsvakwa uye anogadziridzwa kune huru menyu yechishandiso zuva nezuva.
Cinema HD V2 - Iyo Yakakurudzirwa Rondedzero chimiro
Uye zvakare, iyo application inokupawo imwe rondedzero inotsamira chete paApp's AI kusefa chishandiso kusefa uye inokurudzira mabhaisikopo nemashowa emhando imwe chete nezvauri kuona kana kutsvaga.
Mafirimu uye anoratidza izvozvo Cinema HD inokurudzira iwe mese uchauya neruzivo rwakadzama senge zita, chiyero, mavambo, zuva rekuburitsa, trailer, uye vatambi vakuru. Kubva pane ruzivo rwakadzama runokubatsira kuti unzwisise ruzivo nezvemamuvhi, chirongwa chinoita kuti zvive nyore kwauri kuti usarudze zvakakunakira iwe uye unakirwe nazvo.
Kuti ndikupe iwe ruzivo rwakanyanya, kunze kwekukupa huwandu hukuru hwezviratidziro nemabhaisikopo hova, Cinema HD zvakare inokubatsira iwe kunakidzwa nemhando yepamusoro pasina kupinda mune chaiyo-marara.
Iwe uchave uine yakakwana nguva yekuzorora neyako yaunofarira mashoo uye mafirimu mukati zvizere zvemhando yepamusoro resolution neapp iyi. Mukuwedzera, iwe unogona kushandisa iyo autoplay chimiro kuti utarise HD or Ultra HD mafirimu mu Cinema HD.
Iwe uchave nekunakidzwa kwakanyanya kwekuona bhaisikopo neiyo offline yekurodha ficha iyo Cinema HD zvinokupa iwe. Nechinhu ichi chinobatsira, unogona kudhawunirodha mabhaisikopo, maTV uye unakirwe chero zvezvaunofarira zviri nyore.
mafirimu uye terevhizheni - Cinema HD v2
Unogona kunakidzwa nemabhaisikopo, uye anoratidza pane yako Android nhare chero nguva uye chero kwaunoda neichi Cinema HD Apk app. Dhawunirodha mabhaisikopo, terevhizheni uye nyura muzvikamu zveTV, bhaisikopo pasina chinongedzo cheinternet kana nharembozha inochaja pamudziyo wako.
Cinema HD ichakuchengetera nguva yakawanda paunenge uchishandisa iyo app nekutsigira zvese zvaunofarira, nhoroondo, marongero, uye zvaunofarira kune imwe faira rakaparadzana iwe chete. Kuti uwane nzvimbo yefaira iyi, iwe uchaenda Dhaunirodha/cinema HD/backup.
Iwe unogona zvakare kutumira iyo faira uye kuiisa kune chero yako mitsva zvishandiso. Uyezve, iyi app inokupa iwe auto-backup chimiro, saka unogona kuigonesa mushure mekubuda muapp mu backup uye kudzoreredza marongero. Kubva ipapo, iyo backup ichabatwa mushure mekuvhara iyo app, uye iwe unogona kuenderera zviri nyore kunakidzwa nezvaunofarira zvemukati nguva inotevera.
The Cinema HD App ichakupawo zvimwe zvakawanda zvakakosha senge mafirita, inoridza vhidhiyo inoridza, uye kugona kusefa kunze kwemhando yakaderera. Iwe uchawana aya akasiyana, anobatsira maficha kuti akupe iwe inoshamisa yekuona chiitiko chemafirimu ako aunofarira uye anoratidza.
Kana iwe uchida kuona yakakwidziridzwa vhezheni ine akawanda epamberi maficha emahara kune inotonyanya kushamisa chiitiko, dhawunirodha Cinema HD Apk pane yedu webhusaiti CinemaHDv2.Net. Nedu Cinema HD Mod Apk, iwe uchawana akawanda epamberi maficha, anosanganisira: Zvese zvirimo ndezvemahara uye hazvina muganho.
Cinema HD Apk ishanduro yakagadziridzwa ye Cinema HD TV inoratidza inowanikwa mahara pawebhusaiti yedu CinemaHDv2.Net. Neiyi apk faira, unogona kuwana zvakasununguka zvese zvirimo izvo Cinema HD app inopa mahara.
Cinema hd - Tarisa HD mafirimu Emahara
Mukuwedzera, the Cinema HD Apk ichakupawo huwandu husina muganho hwemukati, kuti iwe ugone kunakidzwa nemafirimu ako aunofarira uye anoratidza pasina kunetseka nezve kupera kwezvinhu.
Nekuda kweaya epamberi maficha eiyi bhaisikopo app, iwe unochengetedza mari yakawanda uye haufanire kubhadhara pamwedzi miripo yekunyoresa, ingosarudza zvaunofarira zvemukati uye unakirwe.
Kana iwe wakamboona mafirimu ekuona mapuratifomu senge Netflix, HBO, kana mamwe maapplication ekutepfenyura, ungangove wakaneta nekusainira account uye kubhadhara muripo kuti uwane yako yaunofarira mafirimu, anoratidza, uye mibairo. vamutse.
Zvino, iwe hauchafanira kunetseka pamusoro peizvi zvakare, Cinema HD application ichapa chishandiso chekusarudza zvakasununguka uye kufambisa mafirimu, uye TV inoratidza pasina kusaina kuaccount uye mahara zvachose.
Iwe haufanirwe kunetseka nezve kuburitsa ruzivo rwako pachako kunyoresa account senge zita rako, kero, uye email. Nechinhu ichi, unogona kuwana wakasununguka uye kunakidzwa nezvako zvaunofarira zvemukati zvinopihwa neCinema pasina kupinda muakaundi yako.
In Cinema HD Apk, hauzonetseke nezvekushambadza kuchaita sekukanganisa chiitiko chako. Iyi mod vhezheni ye Cinema HD ichabvisa ese ads kuitira kuti utarise mabhaisikopo, uye TV inoratidza zvisina musono uye pasina kukanganisa.
Cinema hd v2 apk kurodha pasi
To download Cinema HD Apk application yekunakidzwa emahara mafirimu, TV inoratidza, unogona kutevedzera ari nyore nhanho pazasi:
Step 1: Ku isa Cinema Apk, iwe uchafanirwa kubvumira yako Android mudziyo kuisa iyi Anwendung kubva kunze zvinyorwa. Kuti ugone kugonesa iyi kuseta, iwe uchafanirwa kuenda kuSettings mune yako Android, wobva wasarudza Chengetedzo, wobva wagonesa zvisingazivikanwe masosi.
Step 2: Pane yako Android mudziyo chidzitiro, iwe uchaenda CinemaHDv2.Net uyezve tsvaga Cinema HD Apk pane yekutsvaga.
Step 3: Unodzvanya "Download Cinema HD v2 APK” bhatani riri pazasi pechinyorwa
Step 4:Mirira Cinema HD Apk app yekurodha maitiro kwemasekondi mashoma, ipapo unogona kuvhura iyi cinema apk kuti unakirwe.
⬇︎ Dhaunirodha Cinema HD V2 APK
Kutanga, iwe unoenda kune zvigadziriso pane yako Android kifaa, uye sarudza "Zvirongwa uye zviziviso":
Zvadaro, sarudza "Mvumo yeApp"
Wobva waenda ku"Isa zvisingazivikanwe maapp"
Sarudza Chrome browser nezvesarudzo:
Batidza: "Bvumira kubva pane ino"
Pamba skrini, iwe unoenda kune chrome browser uye wozosarudza Downloads
Ita maitiro e Isa Cinema Apk faira
gadza Cinema HD v2
Mirira kuti kuiswa kwacho kuzadzike
Mushure mekupedza kugadzwa kwe Cinema HD V2, ikozvino unogona kukurumidza kuvhura iyo apk faira uye kunakidzwa akawanda mafirimu uye TV inoratidza iyo Cinema Apk inopa pane yako Android smartphones, pasina Android emulator.
To download izvi Cinema HD Apk on FireStick 4K, Moto TV Stick 4K, kana iwe wakaisa chero Apk faira pane yako Tsvimbo yemoto, zvichava nyore kuisa iyo app. Zvikasadaro, iwe unozofanirwa kutevera matanho ari pazasi kuti uise Cinema Apk paFirestick:
Step 1: Chekutanga, iwe uchatanga mudziyo wako uye kumirira kuti chidzitiro chemba chemudziyo chiratidze. Pane yako control system screen, iwe uchafanirwa kugonesa "Hazvizivikanwi mawanikwa"(Isa zvisingazivikanwe maapp) kuchinja.
Step 2: Zvadaro, sarudza: "Yangu Fire TV"Kana kuti"midziyo yangu"
Step 3: Wobva wadzvanya pa: “Sarudzo dzesarudzo"
Step 4: Iyo skrini icharatidza sarudzo "Zviwanikwa zvisingazivikanwi” yaunogona kugonesa kana kudzima.
Step 5: Tevere, iwe uchatsvaga sarudzo "Downloader” paHome Screen uye tinya pa “tendera” kushandisa iyi app kuvhura downloader app.
Step 6: Mu"Dhawunorodha app” skrini pane yako Moto TV Stick, iwe uchaita kune yayo browser chikamu uye isa chinongedzo: https://cinemahdv2.net/download/ kuti uzarure iyo Cinema Apk app uye dhawunirodha iyi yemahara nzvimbo faira app kuti unakirwe nemamuvhi uye chirongwa. Kana dhawunirodha iyo Apk faira pano:
⬇︎ Dhaunirodha Cinema HD V2.4.0 APK
Step 7: Mushure mekupedza kurodha pasi Cinema Apk paFirestick, Moto TV, ichabva yamisa kuisirwa otomatiki uye nekukurumidza. Haufanire: usabude pachiratidziro chikuru kuti maitiro ekuisa aitike zvinobudirira.
Step 8: Mushure mekupedza kuisa Cinema Apk paFirestick, unogona kuvhura iyo Cinema HD Apk faira uye unakirwe aunofarira anoratidza uye mafirimu chero nguva, chero kwaunoda.
Unogona kukurumidza install Cinema HD apk on FireStick 4K, Moto TV Stick, Moto TV Cube nematanho akachengeteka uye anoshanda kune midhiya yako inowanikwa. Unogona kunakidzwa zvakasununguka kutenderera zvemukati paunenge uchishandisa Cinema HD apk usingaendi kuKutepfenyura Saiti kana kuti uise maapplication.
Iwe uchada Android Emulator Nokuda kweizvi. Nox App Player ihuru itsva Android emulator ine zvakawanda zvinobatsira maficha. Unogona kuwana Nox App Player offline setup kubva pazasi.
⬇︎ Dhawunirodha NoxApp Player YeWindows
⬇︎ Dhawunirodha NoxApp Player yeMac
mira kuti kuiswa kupedze. Kana iyo yekuseta isina Indaneti yapedza kudhawunirodha, tinya kaviri faira rinobatika kuti utange kuisirwa Nox App Player.
Pauchada tanga Nox App Player, wizard yekuisa inooneka pachiratidziro ine mabhatani mashoma. Pahwindo rekupedzisira, 'gadza' bhatani richaonekwa. Ndokumbira tinya iyo 'gadza' bhatani rekubvumidza kuseta isa Nox App Player pane yako Windows PC/MAC Computer.
Mushure mekutangisa emulator, ramba uchifunga kuti zvinogona kutora nguva kuti iise. Iyo Nox App Player ichakurumidza kuseta paPC yako.
Zvino, kana usati watoita, dhawunirodha iyo Cinema APK kubva pane iyi link iripazasi.
⬇︎ Dhaunirodha Cinema HD APK
Kana mafaera eAPK apedza kudhawunirodha, tinya kaviri paari kuti utange Nox App Player. Sarudza Vhura With kubva pane pop-up menyu inooneka.
Iyo emulator inozorodha otomatiki uye nekuisa iyo APK faira pane yako Windows PC/MAC Computer.
Maitiro acho achatora maminetsi mashoma kuti apedze. Pashure paizvozvo, the Cinema APK icon inogona kuwanikwa pa Nox App Player kumba kona.
Kuti utange chirongwa, ingobaya chiratidzo chayo.
Unogona kuisa Android APPS pa Linux uye zvinobva mairi, kusanganisira Mint, Ubuntu, uye Fedora, achishandisa Shashlik Android Emulator or GenyMotion Android Emulator.
Unogona kuona mirairo yemugadziri weShashlik Android Emulator kubva pano. Taisawo kopi pazasi kuti zvikuitire nyore.
Uchishandisa murairo unotevera mukuraira kwekuraira, dhawunirodha Repo Tool:
Tevere, nyora murairo unotevera muhwindo rekuraira pane inotevera skrini inooneka:
Zvino, ndapota gadzira dhairekitori idzva uye tanga repository sync. Kuti zvikuitire nyore, mirairo inotevera yakapihwa.
Pakupedzisira, nyora murairo unotevera kuti upedze kuisa.
Unogona kushandisa chinongedzo chakanyorwa pamusoro dhawunirodha GenyMotion Android Emulator pamushini wako weLinux.
Pakupedzisira, dhawunirodha uye isa GenyMotion paLinux PC yako. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezve iyi maitiro kubva the link pamusoro.
Shandisa Shashlik Android Emulator
Dhawunirodha uye isa iyo Android emulator kubva http://www.shashlik.com/ -> Pamusoro pako Linux PC, dhawunirodha uye utange iyo Shash.
Download Cinema HD Latest APK faira kune yako kifaa. Isu takapa chinongedzo pazviri pazasi, senzira yekukuitira iwe.
Dhonza uye udonhedze iyo Cinema HD Mod APK faira pane Shashlik Emulator's interface.
Nhanho inotevera ichave yekumhanyisa installer.
Mushure mekuisa, unogona kutanga kushandisa Cinema HD pane yako Linux system.
Ndokumbira uvhure GenyMotion Android Emulator.
Dhonza uye udonhedze iyo Cinema HD Ad-yemahara MOD APK faira rawakadhawunirodha kubva papeji yapfuura kuenda kuGenyMotion's interface.
Kuiswa kwacho kuchatanga.
Mushure mekuiswa kwapera, unogona kushandisa Cinema HD APK kutepfenyura mafirimu ako aunofarira uye zvirongwa zveTV mahara.
Iye zvino unogona kuona aunofarira mafirimu uye akateedzana pane chako Android kifaa. NeCinema APK, unogona kunakidzwa ese ako aunofarira mafirimu, TV anoratidza, uye akatevedzana mahara. Iwe unogona ikozvino kutarisa zvakanyanya sezvaunoda nekuda kweiyi software inoshamisa, inouya nehunyanzvi hwekugona uye ndeyemahara zvachose.
Cinema HD APK ine huwandu hukuru hwematanho eTV ekukupa mukutsanangurwa kwepamusoro, uye nekuti iyi app inoshamisa zvekuti inogona kukuchengeta wakanamatira kune yako Android mudziyo nguva dzese.
Kunyangwe iyo application haisati yave kuwanikwa paGoogle Play, inogona kuiswa pamudziyo wako uchishandisa yechitatu-bato zviwanikwa. Iyo app ndeyemahara uye ine zvakawanda zvezvinhu zvekuti iwe unakirwe.
Iyo app inosanganisira akati wandei akasarudzika maitiro uye maficha, mamwe acho ari anotevera.
Hapana mari yakavanzika ine chekuita nesevhisi iyi.
Iko kushandiswa kwemhando yepamusoro yezvinyorwa kunowedzera kukwezva kwayo.
Iyo purogiramu yakachengeteka zvakanyanya uye yakavimbika.
Iine chitarisiko chikuru chinoita kuti iite seinoyevedza.
Kune hupfumi hwezviteshi zveTV uye zvimwe zvinhu zvinosvikika, izvo zvinoshamisa.
Nzira 1: Kushandisa Pen Drive Method
1; Unogona kushandisa iyi software pane yako Smart TV, zvakaita se Samsung Smart TV, LG SmartTV, Sony, nevamwe.
2; Chekutanga uye chakakosha, batidza yako Smart TV's Settings menyu.
3; Set Bvumira kubva Hazvizivikanwi mawanikwa kuOn.
4; Tsvaga "ES File Explorer" mu Play Store uye dhawunirodha kumudziyo wako.
5; Vhura iyo app uye tinya ADD.
6; Mushure meizvozvo, tinya kaviri faira uye woita kuti iiswe pane yako Android kifaa nekudzvanya pane bookmark. -> Dzvanya pamabhukimaki kuti uwane uye install a Cinema APK app kubva https://cinemahdv2.net/.
7; Unogona kuisa chirongwa kubva kudhawunirodha mafaera wobva watanga kuishandisa.
Nzira 2: Kushandisa Puffin Browser
Iwe unogona gadza Cinema HD APK faira pane yako Smart TV kushandisa Puffin Bhurawuza. Iyo puffin browser ibhurawuza nyowani rinonyanya kushandiswa paSmart TVs kudhawunirodha maapuro. Rega ndikufambise iwe nzira yekudhawunirodha uye kuisa Cinema HD APK ine puffin browser.
Vhura iyo Smart TV's Play Store uye isa iyo Puffin Browser.
PaSmart TV yako, vhura iyo Play Store uye kuisa iyo Puffin Bhurawuza.
Open ari Puffin Web browser ako Smart TV (inoda chinongedzo kuInternet).
Download Cinema HD APK kubva pane iyi link pazasi uchishandisa iyo Puffin browser. Iyo APK faira ichachengetwa mune yako Dhawunirodha folda mushure mekurodha.
Tinya pane iyo APK faira kana wangoidhawunirodha pakombuta yako. Wobva waenda kune yekurodha folda uye tinya kaviri iyo APK faira. The Zvisingazivikanwe Source sarudzo ichaitwa.
Kana uchida install iyo APK faira pane yako smart TV, unofanira kutanga wabatidza Zvisingazivikanwe Source kuita.
Mushure mekugonesa iyo Zvisingazivikanwe Source sarudzo, shandisa iri kure Enter bhatani kuvhura iyo yakatorwa APK faira.
The Cinema HD APK ichaiswa pane yako Smart TV mushure mekunge wabaya bhatani rekuisa pakukurumidza.
The Cinema HD App ikozvino yakaiswa; unogona kuiwana nekuenda kuApps mune yako Smart TV.
Usati warodha uye kuisa iyo Cinema HD APK, iva nechokwadi chekuti smart TV yako ine nzvimbo yakakwana.
Trakt TV ndeye smart TV yekuwedzera-iyo inorekodha yako yese nhoroondo yekuona. Iyo Trakt TV yekuwedzera inochengeta zvese zvaunoona pane yako smart TV. Unogona kutarisa kumashure pane zvakapfuura zviratidziro zvawakaona pane yako smart TV. Heano maitiro ekusanganisira iyo Trakt TV yekuwedzera mune iyo Cinema HD App.
Mushure mekunge waisa iyo Cinema HD App, enda ku menyu sarudzo uye sarudza Settings.
Tora iyo Accounts chisarudzo mu Settings zviripo.
Mune menyu maakaundi, sarudza Pinda kuTrakt TV sechisarudzo chechitatu. Isa iyo yekuwedzera nekusarudza sarudzo.
Zvino iwe unofanirwa kuisa yako Trakt TV magwaro mubhokisi rekupinda. Mune zita rekushandisa uye password minda, nyora zita rako remushandisi uye password. Wobva wadzvanya "Nyorera mu"Bhatani.
Iyo Trakt yekuwedzera ikozvino inoita kuti utarise chikamu chewachi yega yega.
Tevedzera maitiro akafanana nekare, asi panguva ino enda kune yako Android TV Box's chengetedzo zvigadziriso uye gonesa Zvisingazivikanwe Source.
Mushure meizvozvo, unogona kushandisa chinongedzo chakapihwa kuti uwane iyo app's APK faira.
Mirira kusvika kurodha kwapera wovhura faira racho.
Tsvaga iyo app mune yako Android TV Bhokisi mushure mekuiswa kwapera.
Iwe unogona ikozvino kuvhura uye kushandisa chirongwa kubva pane ino skrini.
Usati watanga kugadzwa, ita shuwa kuti yako Android smartphone uye gore mudziyo wakabatana kune imwecheteyo WiFi network. Haufanire kudzura yako Android foni iyi.
Unogona kukopa Cinema APK Faira kune yako Android smartphone kubva pano.
Download CINEMA HD v2 APK kubva pane iyi link iripazasi:
Kutanga, iwe unofanirwa kudhawunirodha uye kuisa yechitatu-bato chirongwa chinozivikanwa se '.Yemunharaunda Cast' kubva ku Google Play Store.
Open ari Local Cast app. Iyo huru skrini yechishandiso ichave neyero Casting Icon. Sarudza imwe nekudzvanya pairi, uye iwe unozoendeswa kune runyorwa rwemidziyo inogona kufambiswa.
Pachave nesarudzo yekuchinja iyo inoshanda scan. Shandisa nzira iyi kugonesa iyo 'Discovery Options' pa Roku.
Kutanga, batanidza iyo Roku Tanda kune yako Smart TV uye ona kuti une yakagadzikana internet yekubatanidza mumba mako.
Vhura Roku Store paTV yako.
Mukona yezasi yekurudyi, uchaona sarudzo yekutsvaga; apa ndipo paungatsvaga Local Cast Reciever.
Kana zvese zvaiswa, dzokera kupeji huru yemenyu yemudziyo wako.
Isa yazvino cinema HD yakapihwa mune yakapfuura link uye tanga iyo.
Iye zvino iwe unofanirwa kusarudza firimu kana TV show kuti uone.
Iwe unozopihwa akasarudzika links kuti uwane iyo bhaisikopo kana chirongwa chawakasarudza.
Iwe unofanirwa kutanga waTopa uye kubata chero zvinongedzo zvinoonekwa, wozosarudza iyo Vhura neAll Cast sarudzo.
Ndizvo chete zviripo! Iye zvino aunofarira firimu/TV akatevedzana anogona kutariswa paRoku. Iwe haungatadziswe kutora mafoni kana kutumira mameseji uchitenderera pane yako Android smartphone.
To install Cinema HD APK paRoku, tevera matanho mashanu akareruka aya. Kana uine chero mibvunzo, ndapota usazeza kutibata nesu kuburikidza ne kuonana peji.
Android mafeni vachafara kudzidza kuti itsva Google TV 4K ne Chromecasts inotsigira Android apps nemitambo. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuisa yechitatu-bato Android APKs pane yazvino Google TV 4K ine Chromecast futi. Ngatitarisei nzira yekuisa Cinema HD APK paGoogle TV 4K kushandisa Chromecasts munyaya ino.
Kuisa Cinema HD Ad-Yemahara APK on Google TV 4K, unofanira kupedzisa nhevedzano yezviito. Heino mhedziso pfupi yekukuitira nyore.
Gonesa Sarudzo dzeMugadziri (Chikamu 1)
Tevedza matanho ari pasi apa kuti ubatanidze yako Google TV gadget neyako smart TV.
Tinya paProfile Menu bhatani riri kumusoro-kurudyi kona yeGoogle TV skrini.
Zvirongwa, giya icon Tinya pa Sarudza System Mupumburu pasi uye sarudza Pa Android TV OS Vaka kanomwe uchishandisa Google TV kure kure yepakati bhatani, ndapota sarudza About.
Tapota tinya Android TV OS Vaka 7 nguva uchishandisa bhatani repakati peGoogle TV repakati pasi peAbout.
Uchaona chiziviso chichiverengwa "Uri Mugadziri.” Iwe unozogona kudhawunirodha wechitatu-bato zvikumbiro pa Google 4K.
kuisa Cinema HD APK yeGoogle TV 4K (Chikamu 2)
Ndokumbira uende kusarudzo yeApps kubva pane yakachinjika menyu paGoogle TV's skrini yekumba.
Zvadaro, pasi peApp Categories, sarudza Tsvaga Mapurogiramu.
gadza Downloader paGoogle TV yako nekuisa Dhawunirodha muBhari yekutsvaga.
Open ari Dhawunirodha App kana kuiswa kwapera.
Ndapota vhura Privacy > Chengetedzo & Zvirambidzo Mune yako Zvirongwa zveProfile.
Ndapota ona Zvisingazivikanwe Source yakagoneswa pasi pesarudzo yeUnknown Sources.
Mushure meizvozvo, vhura iyo Downloader app kubva pachiratidziro chekumba pasi pechikamu cheMapurogiramu Ako.
Bvumira kupinda nekudzvanya pakanzi Bvumira.
Ndokumbira uise iyo inotevera URL mundima yeDownloader App's URL kuti udhawunirodhe Cinema HD Yazvino APK yeGoogle TV.
Paunenge wapedza kudhawunirodha APK, yakapusa pa-screen yekumisikidza mirairo ichaonekwa. To install Cinema HD paGoogle TV, tevera matanho akafanana.
Ndizvo chete zviripo! Unogona kuisa chero yechitatu-bato Android App pa Google TV 4K ne Chromecasts nekutevera mirairo iri pamusoro.
Maitiro ekugadzirisa iyo Cinema App paGoogle TV neChromecast
Iyo nzira yekuvandudza Cinema HD paGoogle TV kune yazvino vhezheni iri nyore. Takakutsanangurira zvese pasi apa.
Enda ku Mapurogiramu Ako > Cinema HD.
Sarudza uye ubate iyo app rondedzero.
Chidzitiro chichabuda chichikukumbira kuti usarudze View Details.
Gadziridza kana Uninstall ndidzo sarudzo mbiri.
Vhura iyo Google tv kure app pane yako Android system uye enda ku Settings, wobva wasarudza Mapurogiramu. Sarudza Cinema HD Mod APK kuibvisa pane yako
Ndokumbira uchengete mupfungwa kuti haugamuchire otomatiki zvigadziriso zveapp sezvo isiri kubva kuGoogle Play Store. Kuti uwane yazvino vhezheni, ingo bvisa uye dzosera iyo application.
Kuti ndikuunze iwe ruzivo rwekuona mafirimu, uye TV inoratidza muhuwandu husingagumi, ivo vanogadzira zvemukati Cinema HD Apk icharamba ichivandudza uye kuburitsa mavhezheni matsva ane mamwe maficha, iyo yakagadziriswa bugs shanduro uye zvimwe zvakawanda.
Kana iwe uchida kugadzirisa kune yazvino vhezheni yeapp, unogona kutevedzera ari nyore nhanho pazasi:
Paunowana meseji yekuvandudza yega pese panowanikwa shanduro itsva, unogona kudzvanya gadza muhwindo rekuvandudza uye tanga kuisa iyo itsva vhezheni.
Iwe unogona zvakare kutarisa mitsva yakagadziridzwa shanduro yeapp kubva menyu → Kurukura → New Update Inowanikwa uye tanga kuvandudza shanduro itsva kuti unakirwe.
Mushure mekupedza kugadzwa kwe Cinema apk, iwe unowana iyo application iri nyore kushandisa nekuti haidi chero ruzivo rwehunyanzvi. Unogona kukurumidza kuvhura iyi app kubva pachiratidziro chikuru kuti utange kunakidzwa nekutepfenyura zvemukati.
Paunovhura iyo Cinema Apk kekutanga, uchaona Anwendung's ruzivo ruzivo. Uye iwe uchabata "Ramba” kuti uenderere mberi nekushandisa iyi app, kana unogona kubaya “pedyo” kana uchida kurega.
Paunoramba uchishandisa iyo Cinema Apk, iwe unozounzwa neyemushandisi interface, iyo inoratidza TV inoratidza neiyo default vhidhiyo inoridza. Kuti usarudze kutepfenyura mafirimu emahara, enda ku menyu uye sarudza Movies kubva pakaderera pasi.
Mune katalog yezvinyorwa inopihwa neCinema Apk, iwe unowana muunganidzwa wemafirimu emuHollywood ane mukurumbira uye TV anoratidza, uye iwe unogona kusarudza chero yaunofarira zvemukati kuti unakirwe nekuzvisarudza kubva kupeji repamba kana kuzvitsvaga uchishandisa bhokisi rekutsvaga.
Mushure mekusarudza zvaunofarira zvemukati, unozofanirwa kubata iyo "Watch” bhatani uye tanga kunyura mumitambo inoyevedza nemabhaisikopo. Iwe unogona zvakare kusarudza kubva pamusoro pemitauro makumi maviri yakasiyana inotsigirwa neCinema APK. Nekuda kweizvozvo, unokwanisa kuona zvine mukurumbira kubva kunzvimbo dzausingazive rurimi rweko.
Kana iwe usingagutsikane neiyo default set yeizvi Cinema Apk, unogona kuibvisa uye kuisazve app. Unogona kushandisa Chaiye Debrid link jenareta kudzivirira caching. Chaiye Debrid inokupa iwe yakawanda-yemhando yepamusoro zvinongedzo kubva kumaseva anoderedza caching uye unogona kunakidzwa nemhando yepamusoro bhaisikopo uye kuratidza zvinongedzo. Saka nekukurumidza pinda mumarara chaiwo mune yako account marongero uye tora aya malink ipapo.
FAQs nezve Cinema HD V2
Ndinogona here kunakidzwa nemamuvhi nemaTV pandinenge ndisiri pamhepo paCinema apk?
Ehe. Iyi Cinema apk inokutendera kuti utore chero bhaisikopo, uye woriratidza kuchishandiso chako, kuti iwe ugone kunakidzwa zviri nyore mafirimu akadhawunirodha uye tv inoratidza kunyangwe iwe usina internet yekubatanidza kana nharembozha.
Ndinofanira kudzura foni yangu Android ndisati ndadhawunirodha Cinema HD APK?
Kwete, haufanire kudzura mudziyo wako kutanga, uye unongoda kugonesa isingazivikanwe sosi kurodha cinema apk.
Ndinogona here kuwedzera zvinyorwa zvidiki zvemamuvhi, anoratidza mukati Cinema HD Apk nemaoko?
Ehe. Cinema HD inokupa emahara mafirimu uye TV akatevedzana ane zvinyorwa zvidiki zviripo muraibhurari yeiyi bhaisikopo app. Nekudaro, iyi Cinema apk app zvakare inobvumidza iwe kuti uwedzere ma subtitles pamaoko. Kuti uite izvi, unogona kudzvanya pane zvigadziriso mu media player uye wozosarudza subtitle faira (.srt) kubva munzvimbo yekuchengetedza uye unakirwe nezviri mukati ipapo.
Ini ndinofanira kunyoresa account uye kubhadhara mubhadharo wepamwedzi wekuona mafirimu nemashowa paCinema Apk?
Kwete. Unogona kuwana iyi app wakasununguka pasina kunyoresa kuaccount. Zvakare, iyi Cinema Apk zviri pamutemo pane yedu webhusaiti cinemahdv2.net inopihwa mahara, saka iwe unogona kunyudza iwe pachako mune yaunofarira zvemukati inopihwa neapp pasina kunetseka nezve chero chinhu.
Kwakachengeteka here kuisa Cinema HD app pawebhusaiti yako?
Cinema HD Apk pane yedu webhusaiti cinemahdv2.net yakaongororwa uye yakaedzwa kuburikidza ne-anti-malware zvishandiso. Isu takaedza iyo app uye hatina kuona chero huipi, saka unogona kuvimbiswa 100% kuchengetedzeka kweapp iyi uye unakirwe nezvairi kupa.
Chii chandinofanira kuita kana yangu Cinema HD app ine dambudziko rekutepfenyura link?
Kana iwe ukasangana nedambudziko uchiedza kuridza chinongedzo chekushambadzira, zvinoratidza kuti kubatana kwadzikira. Iwe unofanirwa kumirira kusvika chinongedzo chagadziriswa.
Zviri pamutemo here kushandisa iyo Cinema HD app?
Hazvisi pamutemo kudhawunirodha uye kuisa iyo Cinema HD app pafoni yako, asi kutepfenyura zvinhu zvine copyright kutyora. Saka usafambise chero chimwe chinhu kunze kwezvakatenderwa zvemukati.
Is Cinema HD inopindirana nemudziyo wangu?
Unogona kuisa Cinema paFirestick/Fire TV, FireStick Lite, Android TV Mabhokisi, Android nharembozha, nezvimwe.
Is Cinema HD Iyo Yakanakisa Movie App Inowanikwa?
Ehe, Cinema HD App ikozvino ndiyo yakanakisa sarudzo yekuona mafirimu nematerevhizheni emahara.
Ini Ndomisa Sei Iyo App yeTV Yangu?
Izvi hazvifanirwe kuve dambudziko muzera reGoogle Chrome, Amazon Firestick, uye matekinoroji akafanana.
Ndiyo Cinema HD APK inoenderana neSmart TVs?
Samsung Smart TVs, LG Smart TVs, Panasonic smart TVs, Sony terevhizheni, Sony Bravia terevhizheni, Mi TV seti, Cloudwalker smart TVs, TCL smart TVs, Kodak Smart TV seti, uye mamwe akawanda mhando aripo.
Is Cinema HD inoenderana neakangwara maTV uye Firestick/Fire TV?
Ehe! Cinema HD APK inogona zvakare kutorwa uye kuiswa paFirestick kana Fire TV. Iwe unogona zvakare kuisa Cinema HD pa Android TV, Android Bhokisi, Nvidia Shield, PS 4, uye Xbox One.
Zvinofanira here kushandisa virtual private network ne Cinema HD?
Isu tinoita, zvisinei, tinokurudzira kushandisa inokwanisa VPN sevhisi kana uchiona Cinema HD.
Zvinoita here kuisa Cinema Hd paWindows PC?
Ehe! Unogona kushandisa maitiro anotsanangurwa muchinyorwa chino kuisa Cinema HD paWindows PC/Laptop.
Pane Chromecast rutsigiro ne Cinema HD?
Ehe! Cinema HD v2 inotsigira Chromecast.
Cinema HD Apk ndeimwe yeakawanda Android maapuro anokupa iwe aunofarira anoratidza uye mafirimu. Ichi chishandiso chinomira pachena mukuti chinopa vashandisi veAroid neinozivikanwa seCinema app uye HD Mamuvhi ane zviuru zvemufirimu uye TV akatevedzana. Unogona kugutsa chishuwo chako chemuvhi neiyi app, saka nekukurumidza dhawunirodha yazvino vhezheni pa Android, Fire stick & PC pane yedu webhusaiti kuti unakirwe izvozvi.